Ny sidina israeliana voafetra any UAE dia navela hiampita ny habakabaka saodiana
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Ny sidina israeliana voafetra any UAE dia navela hiampita ny habakabaka saodiana
Nanaiky tamin'ny fomba ofisialy ny governemanta Arabia Saodita hamela ny sidina ara-barotra israeliana hiampita ny habakabakany ho any amin'ny Emira Arabo Mitambatra (UAE).
Ny alatsinainy hariva teo no nifanarahana ny fifanarahana, ora vitsy monja talohan'ny sidina ara-barotra voalohany teo anelanelan'ny Tel Aviv sy Dubai voalahatra ny talata maraina. The Israir Airlines Ny sidina dia tandindomin-doza, talohan'ny nanomezan'i Arabia Saodita alàlana ny fitobiana efa ela notadiavina tany Israel, araka ny fampitam-baovao israeliana.
Raha ny tambajotram-pahitalavitra israeliana dia tsara mandritra ny efatra andro ny fifanarahana fa sidina mankao Dubai ihany.
Tsy dia fantatra mazava raha toa ka nahazo alalana tamin'ny mpitatitra Israel i El Al, izay kasaina handefa sidina mahazatra ihany koa any UAE amin'ny volana ambony.
Na izany aza, tompon'andraikitra israeliana iray tsy fantatra anarana mahafantatra an'io raharaha io, fa nisy "jiro maitso" raha ny tokony ho izy, saingy mbola tsy voalamina ny fomba ofisialy.
Ny sidina mivantana dia sampana fanatontosana fifampiraharahana nomen'ny Tel Aviv tato ho ato miaraka amin'ny UAE sy Bahrain.
FlyDubai dia niasa ny sidina fizahan-tany mivantana voalohany avy tany Tel Aviv nankany Dubai tamin'ny voalohan'ny volana novambra, nitondra mpandraharaha sy mpizahatany 174 tamin'ny sidina FZ8194 manan-tantara teo amin'ny sehatry ny habakabaka Saodiana.